La heli karo Mozilla Firefox 44 | Laga soo bilaabo Linux
Mozilla Firefox gala markale si uu ula tartamo daalacashada sare ee hadda jira oo leh nooca 44, cusbooneysiinteedii ugu dambeysay, in kasta oo aysan keenin isbeddello waaweyn oo muuqda marka loo eego nooca 43, waxaa ka go'an horumarro cusub oo xagga amniga iyo asturnaanta ah. Shirkadda softiweer ee bilaashka ah waxay soo saartay cusbooneysiinta Mozilla Firefox 44 bishii Janaayo 26, oo loo heli karo nidaamyada hawlgalka, Windows, Linux, OS X iyo Android.
Mid ka mid ah isbeddelada ugu xiisaha badan ee ku jira noocani waa curyaaminta taageerida sirta RC4 ku saabsan isku xirnaanta HTTPS, in kasta oo ay tahay mid ka mid ah borotokoollada ugu isticmaalka badan, horayba waxay uga hadlaysay nuglaanta iyo godadka qaar ee ay sirtani kaga tagayso amniga biraawsarka.
Mid kale oo ka mid ah riwaayadaha wax yar ka muuqda, una taagan astaamaha ugu muhiimsan ee aan ka soo hadalnay, waa awoodda lagu helo riixaan ogeysiisyada boggaga internetka, iyadoo la adeegsanayo rukhsadda hore ee isticmaaleha. Cusbooneysiintan cusub, Firefox waxay la heer tahay biraawsarka Chrome, kaasoo horeyba ugu soo daray ogeysiisyada riix bishii Abriil ee sanadkii hore nooca ay tahay. Chrome 42.
Si ka duwan ogeysiisyada webka ee Firefox, cusboonaysii 44 waxaad heli kartaa ogeysiisyada riixista xitaa marka barta uusan ku shuban tab, had iyo jeer hubinta amniga iyo asturnaanta adeegsadaha. Faa'iidada ogeysiisyada riixistu way badan yihiin, waxay kuu oggolaanayaan inaad iska hubiso cusbooneysiinta iyo wararka bogagga internetka sida emaylka, cimilada, iyo sidoo kale shabakado badan oo bulsheed.
Taageerayaasha qulqulka, Firefox 44 ayaa hadda awood u siin doonta taageerada H.264 / Mp4, Koodhadh fiidiyoow ah oo badanaa la isticmaalo, kaas oo bixiya waxqabad wanaagsan oo ku saabsan fiidiyaha fiidiyowga, gaar ahaan goobaha HTML5, oo ay ku jiraan adeegyada Streaming.
Cusboonaysiinta cusboonaysiinta, waa wakhti ku habboon in la tijaabiyo boggan biraawsarka bilaashka ah iyo kan furan. Waad geli kartaa bogga Mozilla Firefox oo soo dejiso / cusbooneysii biraawsarkaaga, oo tijaabi wararka ku saabsan Mozilla Firefox 44.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » La heli karo Mozilla Firefox 44
Mozilla illaa iyo hadda waa barta internetka ee ugu wanaagsan ee marwalba browser.
Ma jiraan daalacayaal badan oo taageera barnaamijyo badan. Shaqo wacan.
Ku jawaab sammy
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in ogeysiisyada riixista la hirgaliyay ... laakiin waxaan horeyba ugu haystay qeybta 44 runtuna waxay tahay in xilligan suurtagalnimada dhaqaajinta iyaga iima muuqan websaydh kasta marka laga reebo kuwii hore u oggolaaday, sida sida Telegram Web ama WhatsApp Web.